30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 1 | Somaliska
30kii maalmood ee aan xaaskayga xambaaray – Qaybta 1
Sheekadaan waa sheego xiiso badan oo indhaha u furi doonta lamaanayaal badan oo Soomaaliyeed kuwa hada isqaba iyo kuwa isguursan doona mustaqbalka. Qisada ayaa ah mid ku saabsan nin xaaskiisa xambaarayay mudo 30 maalmood ah. Sababta waxaad ka ogaan doontaan qisada.
Jilayaasha qisada waxaa la kala yiraahdaa Aisha, Osman iyo wiilkooda Abdirahman. Sheekada waxaa inoo soo bandhigaya Osman.
QAYBTA 1 – AAD
Habeenkii markii aan shaqada ka imid xaaskayga waxay diyaarinaysay cashada balse aniga madaxayga arin kale ayaa ku jirtay waxaan go’aansaday in aan xaaskayga la hadlo, waxaan qabtay gacanteeda oo waxaan si hoose ugu iri “waxaan doonayaa in aan kaala hadlo arin muhiim ah.
Si degen ayay u fariisay wayna joojisay hawshii ay haysay. Indhaheeda waan ka dareemay in ay dareemeyso culeys oo wax badan iska badalay guurkeena. Afkayga waan furi waayay oo hadalkii ayaa igu noqday. Balse waa iga go’nayd in aan u sheego fikirkeyga.
“Waxaan doonayaa in aan ku furo” ayaan si degan u iri.
Waxaan aad uga cabsi qabay sida ay u jawaabi doonto balse xitaa uma aysan muuqan in hadalkeyga ay dhibsatay, ee si degan ayay tiri “Waa maxay sababta?”
Su’aashaas ayaa igala xanuun badnayd xitaa haddii ay i dharbaaxi lahayd. Waxaan isku dayay in aan ka leexdo su’aasheeda. Diyaar uma aanan ahayn in aan ka jawaabo Why. Arintaas ayaa ka xanaajisay, waxay firdhisay cuntadii oo waxay ku qaylisay “Nin rag ah ma tihid” ka dibna waxay ku carartay qolka jiifka.
Habeenkaas, ma aanan wada hadlin. Si cabsi ku jirto ayaan isku dayay in aan u seexdo. iyadu habeenkii oo dhan way ilmaynaysay, waan ogaa in ay doonayso jawaab cad oo ku saabsan waxa ku dhacay guurkeena iyo jaceylkeena balse uma aanan hayn jawaab ay ku qanci karto. Waxaan jeclaaday gabadh aan wada shaqeyno oo magaceeda la yiraahdo Deeqo, oo aad u qurux badan. Jaceylkii aan u haayay xaaskayga waxa uu u guuray gabadhaas. Waxa keliya oo aan ku fikiraayay waa sidee isku dhaafisaa xaaskaaga.
mira gedsaran mira kugu jira jebka loma dadiyo
imanka ayaa cirka ka aday tangurika ojogtooo xaskisa ah miyey kaficantahay tan banaankajogta oo uraabo in ugurigisa iska dumiyaa hadusan isku dhaqi karin 2badoda mu iska dayo
Waraabaa laga sheegay ,,,, inuu maalin dhabbaha/jidka kusoo dhacay markaa ayuu wuxuu wadada uga jeeday Daanyeer sii socda , oo sii daba gaduudan , macnaha Daanyeerka Koroowga , sayntiisa halka eey kasoo baxdo waa gaduud .
Dhurwaaga oo maanta dhan ahaa mid Hilib raadinayay oo soo waayay ayaa , yiri Daanyeerna Hiliboow Dabada ku dhegsaday , Anna waan Raadinaayay ……….
Ahku Iskaabulana Halyii yeey TOOSH 4 Qaada ku raadinayaan , bal ninkaana EEGA !!
sheekadna waa aqristay wana sheeko carabaha ka dhacaday gaar aha Dalka Masar
waxaan aqanaaa aktarka iyo atarishada filimkaan midxisaleh waaaye waa run waa filim carabta kadhacay masar yaasalaam
Axmed Rabsho says:
Hadane sidaa u socoteen sheeko been been ah maa noo keenteen lolz qeybta 2 baad la socda walaahi saanoo loo wareeraa hadii la wareeraayo abaa lolz
asc dhaman fadlan umadiina dhahaawo waan aqaanaa aktarka ama atirishada waxaas iska dhaafa oo anaga shekada hanaga qasina ee hadii aad dawateen
walaahi wa waxlagayaabo waxan kayaabay ninka isagoo xaaskiisii conto usamaynayso kofuraya bilasabab waxan waxlaga siiyaaba ah waxay uddirbaxiwayday
waa arin cajiib ah Kabtiisa ayeey tushay isagaa karfanteeda ayuu tolay wlhi cajiib lkn wey dhacdaa waa aduun iyo xalkiisa lkn iska samir ayan dhahi laha lkn Guurka in ay ka fiirsato ayaa fiican marka labaad
Good Lucky ayan u rajaynaya Gabadhd Ninka xun u kuso aday
December 26, 2011 at 22:43
sheekada oo dhamaystiran noo soo gud biya akhwaanii jzkumulahu khayran